Maneho Fitiavan-drahalahy ny Tena Kristianina | Manatòna
1-3. Inona no vokany rehefa tia toa an’i Jehovah isika?
“MAHASAMBATRA kokoa ny manome noho ny mandray.” (Asan’ny Apostoly 20:35) Hamafisin’ireo tenin’i Jesosy ireo fa mitondra voka-tsoa ny fitiavana tsy mitady valiny. Tena mahasambatra ny mandray fitiavana, fa mbola mahasambatra kokoa ny manome, na mampiseho fitiavana.
2 Ilay Raintsika any an-danitra no mahafantatra tsara indrindra izany. Hitantsika tao amin’ireo toko teo aloha tamin’ity fizarana ity fa i Jehovah no ohatra tsara indrindra amin’ny fitiavana. Tsy misy naneho fitiavana lehibe kokoa sy naharitra kokoa noho izy. Mahagaga àry ve raha antsoina hoe “Andriamanitra finaritra” i Jehovah?—1 Timoty 1:11.
3 Tiany hanahaka azy isika, indrindra fa amin’ny fitiavana. Hoy ny Efesiana 5:1, 2: “Aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo tahaka ny zanaka malala; ary mandehana amin’ny fitiavana.” Ho sambatra kokoa isika, rehefa manome, na tia toa an’i Jehovah. Afa-po koa isika mahafantatra fa mahafaly an’i Jehovah izany, satria mampirisika antsika ‘hifankatia’ ny Teniny. (Romana 13:8) Misy antony hafa koa anefa tokony ‘handehanantsika amin’ny fitiavana.’
Tena ilaina ny fitiavana
4, 5. Nahoana no tokony ho feno fahafoizan-tena ny fitiavantsika ny mpiray finoana amintsika?
4 Nahoana no tokony ho tia ny mpiray finoana amintsika isika? Satria ny fitiavana no fototry ny Kristianisma marina. Tsy afaka mifandray akaiky amin’ny Kristianina namantsika isika sady ho tsinontsinona eo imason’i Jehovah, raha tsy eo ny fitiavana. Manasongadina izany tokoa ny Tenin’Andriamanitra.
5 Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany, tamin’ilay alina farany niainany teto an-tany: “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.” (Jaona 13:34, 35) Nasaina haneho ilay fitiavana nasehon’i Jesosy isika, satria hoy izy hoe “tahaka ny nitiavako anareo.” Hitantsika tao amin’ny Toko 29 fa ohatra faran’izay tsara tamin’ny fahafoizan-tena i Jesosy, satria ny zavatra nilaina sy izay nahasoa ny namany no nataony ho ambony kokoa noho ny tenany. Tokony tsy hitady valiny koa ny fitiavantsika, ary tokony hisongadina, ka hahita izany hatramin’ny olona any ivelan’ny fiangonana kristianina. Marika famantarana ny tena mpanara-dia an’i Kristy tokoa ny fitiavan-drahalahy feno fahafoizan-tena.
6, 7. a) Ahoana no ahalalantsika fa asongadin’ny Tenin’i Jehovah ny hasarobidin’ny fitiavana? b) Inona momba ny fitiavana no asongadin’i Paoly ao amin’ny 1 Korintiana 13:4-8?
6 Ahoana raha tsy manam-pitiavana isika? Raha “tsy manana fitiavana” aho, hoy i Paoly, “dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho.” (1 Korintiana 13:1) Ratsy feo ny kipantsona mikarantsana. Ary ny varahina maneno? Misy fandikan-teny hafa milaza hoe “vy mitabataba”, na “vy manako.” Mety tokoa izany fanoharana izany! Toy ny zavamaneno mitabataba tsy misy dikany fotsiny ny olona tsy manana fitiavana, ka tsy manintona fa mampandositra. Ahoana no hahafahan’izany olona izany hifandray akaiky amin’olona? Hoy koa i Paoly: “Na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinontsinona aho.” (1 Korintiana 13:2) Eritrereto fa “tsinontsinona” ny olona tsy manana fitiavana, na dia manao zavatra maro aza! Tsy mazava àry ve fa asongadin’ny Tenin’i Jehovah ny hasarobidin’ny fitiavana?
7 Ahoana anefa no anehoantsika fitiavana rehefa mifandray amin’olona? Hofakafakaintsika ny tenin’i Paoly ao amin’ny 1 Korintiana 13:4-8, mba hamaliana izany. Tsy ny fitiavan’Andriamanitra antsika, na ny fitiavantsika Azy no asongadin’ireo andininy ireo. Ny fomba tokony hifankatiavantsika kosa no ifantohan’i Paoly eo. Lazainy ao hoe inona no fitiavana, ary inona kosa no tsy fitiavana.
8. Ahoana no anampian’ny fahari-po antsika rehefa mifandray amin’olona isika?
8 “Ny fitiavana mahari-po.” Ny hoe mahari-po dia midika hoe mandefitra. (Kolosiana 3:13) Tsy mila izany faharetana izany ve isika? Tsy lavorary isika mpiara-manompo, ka azo inoana fa hahasosotra antsika ireo rahalahintsika indraindray, ary hahasosotra azy ireo koa isika. Afaka manampy antsika hiaritra ny fahalemen’izy ireo anefa ny faharetana, mba tsy handrava ny fihavanan’ny fiangonana.
9. Ahoana avy no azontsika anehoana hamoram-panahy?
9 “Ny fitiavana ... mora fanahy.” Ny fanampiana sy ny teny mahafinaritra no anehoana ny hamoram-panahy. Ny fitiavana no mahatonga antsika hitady fomba hanehoana hatsaram-panahy, indrindra fa amin’ireo tena mila izany. Mety hahatsiaro ho irery, ohatra, ilay mpiara-mpanompo be taona, ka tokony hotsidihina. Mety hila fanampiana ilay reny tokan-tena, na anabavy miara-monina amin’ny mpianakavy tsy Vavolombelona. Mety hila teny mahafinaritra avy amin’ny namana tsy mivadika koa ilay rahalahy marary na mijaly. (Ohabolana 12:25; 17:17) Asehontsika fa tena manana fitiavana isika, rehefa maneho hamoram-panahy amin’ireo fomba ireo.—2 Korintiana 8:8.
10. Ahoana no anampian’ny fitiavana antsika hanohana sy hiteny ny marina hatrany, na dia rehefa sarotra aza izany?
10 “Ny fitiavana ... miara-mifaly amin’ny fahamarinana.” Misy fandikan-teny hafa milaza hoe: “Ny fitiavana ... faly miandany amin’ny marina.” Manampy antsika hanohana ny marina sy ‘hiteny marina amin’ny namantsika’ ny fitiavana. (Zakaria 8:16) Aoka hatao hoe nanao fahotana lehibe ny olona iray tiantsika. Raha tia an’i Jehovah sy ilay nanao fahadisoana isika, dia tsy hanao tsinontsinona ny fitsipik’i Jehovah, ka tsy hanafina, na hanamarina, na handainga momba ilay fanaovan-dratsy mihitsy. Mety ho sarotra amin’ny saina angamba ny manaiky ilay zava-nitranga. Raha mieritreritra izay hahasoa an’ilay olona anefa isika, dia ho tiantsika raha mahazo sy manaiky ny famaizana feno fitiavana avy amin’Andriamanitra izy. (Ohabolana 3:11, 12) Tiantsika Kristianina be fitiavana koa ny “hitondra tena tsara amin’ny zavatra rehetra.”—Hebreo 13:18.
11. “Mandefitra ny zavatra rehetra” ny fitiavana, ka tokony hiezahantsika hatao ahoana ny kileman’ireo mpiray finoana amintsika?
11 “Ny fitiavana ... mandefitra ny zavatra rehetra.” Ny teny grika nampiasaina eto dia midika ara-bakiteny hoe “saronany ny zavatra rehetra.” Hoy ny 1 Petera 4:8: “Ny fitiavana manarona fahotana maro.” Tsy hanasongadina ny tsy fahalavorariana sy kileman’ireo rahalahiny ny Kristianina, raha fehezin’ny fitiavana. Matetika ny fahadisoan’ireo mpiray finoana no madinika, ka azo saronana amin’ny fitiavana.—Ohabolana 10:12; 17:9.
Matoky ny rahalahintsika isika, raha manana fitiavana
12. Ahoana no nampisehoan’i Paoly ny fatokisany an’i Filemona, ary inona no azontsika ianarana avy amin’izany?
12 “Ny fitiavana ... mino ny zavatra rehetra.” Milaza ny fandikan-tenin’i Moffatt hoe ny fitiavana “dia vonona foana hino ny tsara indrindra.” Tsy miahiahy an’ireo mpiray finoana isika, na mihevitra azy ireo ho ratsy saina. Manampy antsika ‘hino ny tsara indrindra’ momba ireo rahalahintsika sy hatoky azy ireo ny fitiavana. * Mariho ny ohatra ao amin’ny taratasin’i Paoly ho an’i Filemona. Nanoratra i Paoly mba hampirisihana an’i Filemona handray tsara indray an’i Onesimosy, ilay andevo nandositra, tonga Kristianina. Tsy nanery an’i Filemona anefa izy fa niangavy tamim-pitiavana kosa. Nilaza izy fa natokisany hanao zavatra mety i Filemona: “Noho ny fahatokiako fa hanaiky hianao no anoratako aminao, ka fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko aza hianao.” (And. 21) Misongadina ny tsara indrindra ao amin’ireo rahalahintsika, rehefa milaza ny fatokisantsika azy isika, noho ny fitiavantsika azy.
13. Ahoana no ampisehoantsika fa manantena ny tsara indrindra ho an’ny rahalahintsika isika?
13 “Ny fitiavana ... manantena ny zavatra rehetra.” Sady matoky ny fitiavana no manantena. Manantena ny zavatra tsara indrindra ho an’ireo rahalahintsika isika, raha tia azy ireo. Raha misy rahalahy “azon’ny ota tsy nahy”, ohatra, dia manantena isika fa hanao zavatra ho setrin’ny ezaka feno fitiavana hanitsiana azy izy. (Galatiana 6:1) Manantena koa isika fa hatanjaka indray ireo nanjary nalemy finoana. Maharitra amin’izy ireny isika, ary manao izay azontsika atao mba hanampiana azy ireny hatanjaka amin’ny finoana. (Romana 15:1; 1 Tesaloniana 5:14) Mbola manantena isika, raha misy olona tiantsika nanao fahadisoana, fa mbola hody ny sainy ka hiverina amin’i Jehovah izy, toy ilay zanaka adala tao amin’ny fanoharan’i Jesosy.—Lioka 15:17, 18.
14. Ahoana avy no mety hitsapana ny fiaretantsika eo anivon’ny fiangonana, ary hanampy antsika hanao inona ny fitiavana?
14 “Ny fitiavana ... maharitra ny zavatra rehetra.” Manampy antsika tsy ho reraka noho ny fahadisoam-panantenana sy ny zava-manahirana ny fiaretana. Tsy avy any ivelan’ny fiangonana ihany ny fitsapana, fa mety ho avy ao anatiny koa. Mety handiso fanantenana antsika ireo rahalahintsika, satria tsy lavorary izy ireo. Mety handratra ny fontsika ny teny tsy voahevitra. (Ohabolana 12:18) Mety tsy hokarakaraina araka ny tokony ho izy ny asan’ny fiangonana. Mety hahasosotra ny toetran’ny rahalahy iray manana andraikitra, ka hahatonga antsika hiteny hoe: ‘Aiza no hisy Kristianina hanao toy izany?’ Hiala amin’ny fiangonana ve isika, ka tsy hanompo an’i Jehovah intsony vokatr’izany? Tsy hanao izany isika raha manana fitiavana! Raha manana fitiavana isika, dia tsy ho takon’ny fahadisoan’ny rahalahintsika ny masontsika, ka tsy ho hitantsika intsony ny tsara ao aminy, na eo anivon’ny fiangonana. Manampy antsika tsy hivadika amin’Andriamanitra ny fitiavana, ary hahatonga antsika hanohana ny fiangonana, na inona na inona zavatra atao na lazain’ny olona tsy lavorary.—Salamo 119:165.
15. Ahoana no anampian’ny fitiavana antsika tsy ho simban’ny fialonana?
15 “Ny fitiavana tsy mialona.” Ny fialonana no mahatonga antsika hitsiriritra izay ananan’ny olona, anisan’izany ny fananany, ny fitahiana azony na ny fahaizany. Fitiavan-tena izany, sady manimba, ary mety handrava ny fihavanan’ny fiangonana, raha tsy voafehy. Inona no hanampy antsika tsy ‘hialona’? (Galatiana 5:26) Ny fitiavana. Manampy antsika hiara-mifaly amin’ireo toa manana tombony eo amin’ny fiainana io toetra sarobidy io. (Romana 12:15) Raha manana fitiavana isika, dia tsy ho tafintohina rehefa misy olona deraina noho ny fahaizany na ny zava-bitany miavaka.
16. Raha tena tia an’ireo rahalahintsika isika, nahoana isika no tsy hirehareha noho ny fanompoana vitantsika?
16 “Ny fitiavana ... tsy mirehareha, tsy mieboebo.” Manampy antsika tsy hirehareha noho ny talenta na zava-bitantsika ny fitiavana. Raha tena tiantsika ny rahalahintsika, ahoana no ahafahantsika hirehareha noho ny fanompoana vitantsika, na ny tombontsoantsika eo anivon’ny fiangonana? Manakivy azy ireo sy mahatonga azy hihevitra ho ambany izany fieboeboana izany. Ny fitiavana no manakana antsika tsy hirehareha noho ny zavatra avelan’Andriamanitra hataontsika eo amin’ny fanompoana azy. (1 Korintiana 3:5-9) “Tsy mieboebo” tokoa ny fitiavana, na “mahatonga ny olona hihevitra ny tenany ho ambony loatra”, araka ny ilazan’ny fandikan-teny iray azy. Manakana antsika tsy hanandra-tena ny fitiavana.—Romana 12:3.
17. Ahoana no tokony hitondrantsika ny olona, raha manana fitiavana isika, ary inona no fitondran-tena hohalavirintsika?
17 “Ny fitiavana ... tsy manao izay tsy mahamendrika.” Ny olona manao izay tsy mahamendrika dia manao zavatra tena tsy mety na manafintohina. Tsy misy fitiavana amin’izany satria tsy miraharaha tanteraka ny fihetseham-po sy izay hahasoa ny olon-kafa. Feno hatsaram-panahy kosa ny fitiavana, ka mahatonga antsika hihevitra ny namantsika. Mahalala fomba, tsara fitondran-tena, ary manaja ny mpiray finoana ny olona manana fitiavana. Ny fitiavana àry no manakana antsika tsy hanao izay “tsy mahamendrika”, dia izay fitondran-tena rehetra manafintohina ny rahalahintsika.—Efesiana 5:3, 4.
18. Nahoana ny olona manana fitiavana no tsy misisika mba hanatanterahana ny heviny foana?
18 “Ny fitiavana ... tsy mitady ny azy.” Hoy ny fandikan-teny iray hafa: “Tsy manantitrantitra ny heviny ny fitiavana.” Tsy hisisika mba hanatanterahana ny heviny ny olona manana fitiavana, ka toy ny hoe ny azy ihany no marina. Tsy misisika mandresy lahatra an’ireo tsy mitovy hevitra aminy izy. Miavonavona ny olona mafy loha toy izany, nefa milaza ny Baiboly fa “ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana.” (Ohabolana 16:18) Hanaja ny hevitry ny rahalahintsika isika raha tia azy ireo, ary vonona handefitra mihitsy, rehefa mety izany. Mifanaraka amin’ny tenin’i Paoly toy izao ny fandeferana: “Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoa ny tenany, fa ny hahasoa ny namany.”—1 Korintiana 10:24.
19. Raha manana fitiavana isika, inona no ataontsika raha misy olona nanafintohina antsika?
19 “Ny fitiavana ... tsy mora sosotra, tsy manao otripo.” Tsy mora tezitra noho ny teny na ny ataon’olon-kafa ny fitiavana. Marina fa ara-dalàna raha sosotra isika rehefa misy olona manafintohina antsika. Tsy ho tezitra tsy misy farany anefa isika raha manana fitiavana. (Efesiana 4:26, 27) Tsy hitadidy na hanisa teny na fihetsika masiaka natao tamintsika isika. Manahaka an’ilay Andriamanitra fitiavana kosa isika satria manana fitiavana. Hitantsika tao amin’ny Toko 26 fa mamela heloka i Jehovah rehefa misy antony tsara anaovana izany. Manadino izy rehefa mamela heloka, izany hoe tsy hamelezany antsika any aoriana ny fahotantsika. Tsy velom-pankasitrahana ve isika, noho i Jehovah tsy mitahiry ny fahadisoantsika toy izany?
20. Ahoana no tokony ho fihetsitsika rehefa misy mpiray finoana voafandriky ny ota, ka misy zavatra ratsy manjo azy?
20 “Ny fitiavana ... tsy mifaly amin’ny tsi-fahamarinana.” Hoy ny Fandikan-teny Katolika: “Ny fitiavana dia ... tsy mifaly amin’ny tsy marina ataon’ny olona.” Hoy ny fandikan-teny hafa: “Tsy faly mihitsy ny fitiavana rehefa misy olona manao zavatra tsy mety.” Tsy mahita fifaliana amin’ny tsy marina ny fitiavana, ka tsy tokony handefitra amin’ny fahalotoam-pitondran-tena mihitsy isika. Ahoana no fihetsitsika rehefa misy mpiray finoana voafandriky ny ota, ka misy zavatra ratsy manjo azy? Hanakana antsika tsy hifaly ny fitiavana, ka tsy hiteny isika hoe: ‘Tsara ho azy izay!’ (Ohabolana 17:5) Tena faly kosa isika rehefa miezaka hatanjaka ara-panahy indray ilay rahalahy nanao fahadisoana.
‘Lalana tsara indrindra’
21-23. a) Inona no tian’i Paoly holazaina tamin’ny hoe “ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay”? b) Inona no fanontaniana hovaliantsika ao amin’ny toko farany?
21 “Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay.” Inona no tian’i Paoly holazaina eo? Efa hitantsika teo fa niresaka momba ireo fanomezan’ny fanahy teo amin’ireo Kristianina voalohany izy. Ireny no famantarana hoe nankasitrahan’Andriamanitra io fiangonana vao niforona io. Tsy ny Kristianina rehetra no afaka nanasitrana, naminany, na niteny tamin’ny fiteny hafa. Tsy nampaninona anefa izany, satria mbola ho foana ireny fanomezana mahagaga ireny. Misy zavatra hijanona kosa, ary tokony hananan’ny Kristianina rehetra izy io. Lehibe kokoa sy maharitra kokoa noho ny fanomezana mahagaga rehetra izy io. Nantsoin’i Paoly hoe ‘lalana tsara indrindra’ izy io. (1 Korintiana 12:31) Inona izany? Ny lalan’ny fitiavana.
Ny fifankatiavana no amantarana ny vahoakan’i Jehovah
22 “Tsy ho levona mandrakizay” tokoa ilay fitiavana kristianina noresahin’i Paoly. Mbola famantarana ny tena mpanara-dia an’i Kristy ankehitriny ny fitiavana feno fahafoizan-tena. Tsy hitantsika eo anivon’ny fiangonan’ny mpivavaka amin’i Jehovah eran-tany ve io fitiavana io? Haharitra mandrakizay izy io, satria homen’i Jehovah fiainana mandrakizay ny mpanompony tsy mivadika. (Salamo 37:9-11, 29) Enga anie isika hanao araka izay fara herintsika mba ‘handehanana amin’ny fitiavana.’ Ho sambatra kokoa isika raha manome fitiavana toy izany. Hiaina mandrakizay koa isika, ary ho tia mandrakizay, toa an’i Jehovah, Andriamanitra fitiavana.
23 Noresahintsika tato amin’ity toko farany amin’ny fizarana momba ny fitiavana ity ny fomba ifankatiavantsika. Maro be anefa ny soa raisintsika avy amin’ny fitiavan’i Jehovah, sy ny heriny sy ny fanaovany ny rariny ary ny fahendreny. Tsara àry raha manontany tena isika hoe: ‘Ahoana no ampisehoako amin’i Jehovah fa tena tia azy aho?’ Hovaliantsika ao amin’ny toko farany izany.
^ feh. 12 Mazava ho azy fa tsy minomino foana ny fitiavana kristianina. Hoy ny Baiboly: ‘Tandremo ny amin’izay mahatonga fisarahana sy fahatafintohinana, ka mialà amin’ireny olona ireny.’—Romana 16:17.
2 Korintiana 6:11-13 Inona no dikan’ny hoe ‘mihamalalaka’ eo amin’ny fitiavana, ary ahoana no anaovantsika izany?
1 Petera 1:22 Ahoana no anasongadinan’ireo teny ireo fa tokony ho feno fahatsorana sy tena izy ny fitiavantsika ny mpiray finoana amintsika?
1 Jaona 3:16-18 Ahoana no ampisehoantsika fa mitoetra ao amintsika ny “fitiavana an’Andriamanitra”?
1 Jaona 4:7-11 Inona no tena antony itiavantsika ny mpiray finoana amintsika?
Hizara Hizara “Mandehana Amin’ny Fitiavana”